Myanmar Gazette » အရောင်ရင့်မှတ်တမ်း – အောက်တိုဘာ ၂၀၁၅	48
ခင်ဗျား သမ္မတမဖြစ်ရင် အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ။ ဘာလို့မဖြစ်နိုင်ရမလဲ။ နိုင်ငံကို ဦးဆောင်ဖို့ သမ္မတ ဖြစ်ဖို့ လိုလို့လား။ – See more at: http://mizzimaburmese.com/article/5736#sthash.RQRN7iqz.dpuf
kai says: ‘Dangerous and complacent’ if racial and religious harmony taken for granted: PM Lee
ဇီဇီခင်ဇော် says: ညင်းညင်းညင်ညင်းးးးးးး
ကထူးဆန်း says: မြန်မာပြည်သားတွေရဲ့ ကံ ကြမ္မာက ရုပ်သေး သမတ တွေ အောက် မှာ ဘဲ နေရတုန်း
ပြောတာ နော် .. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ပြောရရင်.. US ကိုတိုက်ရိုက်အုပ်ချုပ်နေတာကလည်း.. သမ္မတနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့သာဆိုတယ်…
ဇီဇီခင်ဇော် says: ကြိုးဆွဲတဲ့သူ ကောင်းဖို့ ပါပဲ ကိုကိုထူးဆန်းး
မြစပဲရိုး says: ဒီ အမျိုးသမီးကြီး မျက်နှာကြောင့် ကျွန်မတို့ ရွှေပြည် ကို အရာသွင်းနေသူ တွေ ရှိနေခဲ့တယ် ဆိုတာ
မြစပဲရိုး says: ။ကြုံတုန်းလေး
အမေရိကန် က အမေရိကန် က အင်္ဂလန် က အင်္ဂလန် တွေ အကြောင်း ဝေဖန်ထားတာ http://www.buzzfeed.com/alanwhite/everything-comes-with-chips?utm_term=.efB49rV2Vp#.jhdPb5eJe3
kai says: အမှတ်မမှားရင်…. UK က.. တိုင်းပြည်နာမယ်အမျိုးမျိုး.. ရှိသဗျ…
ဂျက်စပဲရိုး says: သူ ရေး ထားတာ ဖတ်ကြည့်ပြီး အဲ့ဒီ ဘက် သွားနေချင်စိတ်တောင် ဖြစ်မိရဲ့။
Mr. MarGa says: There are no guns!
ခေါင်းထဲကို အဲ့စာကြောင်း အရင်ဆုံးဝင်တာပဲ :D
kai says: ဒီချုပ်သမ္မတလောင်းက.. အရပ်သားစစ်စစ်တဲ့…။
naywoon ni says: သူဂျီးတို့ မီဒီယာ သမား​တွေက မြန်​မာနိုင်​ငံ ရဲ့ သမတ ရာထူးကို စစ်​ဗိုလ်​​တွေ လက်​ထဲပဲ ထည့်​​ပေးချင်​​နေတာကိုး ……. ​ပြောင်းလဲဖို့ အချိန်​တန်​ဘီ
kai says: ၀င်းဒိုး တစ်ဆယ် အလကားပေးနေတာ ခဏဖယ်ထားလိုသူများအတွက်..။
မြစပဲရိုး says: 13 Windows 10 Bugs Microsoft Needs to Fix Right Now
မြစပဲရိုး says: ဒီမှာ တီဗီ ချန်နယ်ကနေ နှစ်စဉ်မုန့်ဖုတ်ပြိုင်ပွဲ လုပ်တယ်။ လူကြိုက်များတဲ့ စီးရီး တစ်ခုပါ။
kai says: ဓမ္မစကူးလ်အမည်သုံး၍ ပါတီနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှု မပြုလုပ်ရန်တားမြစ်
မြစပဲရိုး says: ### ### ### ### ### ### ###
စိတ်အေးတော် မူကြပါ။ * ထို့ကြောင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဟု ခေါ်ပါသည်။ * :-))
မြစပဲရိုး says: ထိုင်းလူသတ်မှု မှာ မြန်မာ ကလေး နှစ်ယောက် သတ်တယ် ဆိုတာ ကို မယုံလို့ အမှန်တရား အတိုင်းဖြစ်ဖို့ အဲဒါကို Christopher Harkins နဲ့ က ဦးဆောင်ပြီး ယူကေ အစိုးရ ကနေ full independent investigation တာဝန်ယူဖို့ petition လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
kai says: NCA လက်မှတ်ထိုးမယ့် အဖွဲ့တွေ အကြမ်းဖက် စာရင်းက ပယ်ဖျက်
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရွေးကောက်ပွဲ ရွှေ့ဆိုင်းလိုဟု ပါတီများကို ဦးတင်အေး ခေါ်ပြော
kai says: the prince စာအုပ်ကို.. ဘာသာပြန်ပေးဖို့.. ပြုံးမမကိုတောင်ပြောဖူးသေး…
kai says: ‘‘USDP ရွေးကောက်ပွဲရှုံးမယ်ဆိုရင် USDP အနေနဲ့ အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်တာက အတိုက်အခံအဖြစ်ရပ်တည်ပြီး နောက်ရွေးကောက်ပွဲအထိ စောင့်ဖို့ပဲ’’
ဇီဇီခင်ဇော် says: USDP ကို အတိုက်အခံကောင်းအဖြစ်တောင် မမြင်မိပါဘူးးး
kai says: တပ်နဲ့ USDP ချိပ်နေတယ်လို့.. လူတွေထင်နေတာကို ဖြိုဖျက်ရလိမ့်မယ်..။
ဒီလိုအထင်ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတာကိုက… USDP ရဲ့မဟာဗျူဟာလို့..ထင်…။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: ပြည်တွင်း ကျပ်ငွေသုံးစွဲမှု တွင်ကျယ်လာရန် နိုင်ငံခြားငွေ လိုင်စင်များကိုသာ ရုပ်သိမ်းခြင်းဖြစ်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံသား တစ်ဦးလျှင် အမေရိကန် ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ အထိ ကိုင်ဆောင်ခွင့်နှင့် ၀န်ထမ်း လစာ ပေးချေမှုများမှာ ယခုနိုင်ငံခြားငွေ လိုင်စင်ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့် မသက်ဆိုင်
kai says: https://www.washingtonpost.com/news/post-politics/wp/2015/10/22/transcript-clinton-testifies-before-house-committee-on-benghazi/
By Washington Post October 22 at 10:04 PM As Secretary of State, I worked with the Republican chairman of the Senate Foreign Relations Committee to passalandmark nuclear arms control treaty with Russia. I worked with Republican Leader, Senator Mitch McConnell, to open up Burma, now Myanmar, to find democratic change. I know it’s possible to find common ground, because I have done it.
kai says: . မြန်မာပြည်ဟာ.. အမေရိကားအတွက်…တော်တော်အရေးကြီးတဲ့ “စိတ်ဝင်စားမှု” နေရာမှာရှိနေကြောင်း…။
kai says: InaNew Paper report on 23 October, she was reported to have said: “One of my goals I set for myself should I win Miss World Singapore was to introduce my people to the world.”
kai says: If Singaporeans want to complain about the fact that she is born in Myanmar and they feel like they know Singaporean women born and bred here who are exemplary, then I urge them to encourage these women to join next year’s Miss World Singapore.
Swal Taw Ywet says: ဆရာစံဇာနည်ဗို က ရွေးကောက်ပွဲကာလ ၀န်းကျင် ဆူပူမှု အကြမ်းဖက်မှုတွေ အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိလာနိုင်မယ်လို့ ဟောထားတယ်။
Mike says: ဒီဟော ပြောချက် မှား ခဲ့ပါက
အူးစည် says: NLD ပါတီနိုင်မည်။
kai says: ကျုပ်လည်းသတိရပါ့ဗျာ…။
kai says: ‘‘ကျွန်တော်တို့ မိသားစုက အရှိန်အ၀ါသုံးပြီး မလျော်သြဇာနဲ့ ရှာထားတာကိုသာ သက်သေပြ၊ အဲဒီပြတဲ့လူကို ကျွန်တော် သူပြတဲ့ပမာဏာထက် ဆယ်ဆပြန်လျော်ပေးမယ်လို့ စိန်ခေါ်ရဲပါတယ်’’
kai says: Hane Latt
ဇီဇီခင်ဇော် says: ရန်ကုန်
kai says: အရှုံးမခံမည့် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းများ
kai says: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ကျေးဇူးတင်စကား သဝဏ်လွှာ။
kai says: Scientists from the University of Oxford have discovered that women with larger than average butts are not only increasingly intelligent but also very resistant to chronic illnesses.
မြစပဲရိုး says: ငင်င်င်င်င်င်င်င်င်
၂၀၁၃ က ဒီ သတင်းကြီး ကို ဖော်ပြီး တောင် တစ်ကူးတစ်က တင်ပြ ရတယ် လို့။ မပြောတော့ဘူး။ မပြောတော့ဘူး။ lol:-))))
kai says: အဲဒီအမျိုးသမီး၂ယောက်စင်ပေါ်တက်မဲကန်ပေးလိုက်တာ.. ဒီချုပ်မဲတော်တော်ရသွားလောက်တယ်..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14461
kai says: AYA Bank
kai says: တကယ်လို့ ပြည်ခိုင်ဖြိုး အပြည့်အဝပြန်နိုင်ခဲ့ရင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ အခန်းကဏ္ဍ ဘယ်လိုဖြစ်သွားနိုင်ပါလဲ။
kai says: အင်း.. ကြည့်ရင်းနဲ့.. ကြည့်ရင်းနဲ့.. အဲလိုဖြစ်လာမယ်လို့.. ထင်နေတယ်..။
မြစပဲရိုး says: လုပ်ချင် ဆက်လုပ်ပေါ့။
kai says: မဘသက… အဖွဲ့ချုပ်မဲတွေ တော်တော်များများ.. ဆွဲချသွားမယ်လို့…ထင်တယ်..။
မြစပဲရိုး says: လာပြီ သူကြီးမင်း။
တကဲ့ ကို အရှက်ကင်း အဆင်အခြင်မဲ့ သူ တွေ ကိုယ့်တိုင်းပြည် မှာ ထိပ်တက် နေတာ ပိုပိုပြီး စိတ်ပျက်၊ ပိုပိုပြီး ရှက်မိနေတော့တယ်။ Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.